एउटै भालेको तौल १४ किलो - Harekpal
Tuesday, Oct, 27, 2020 ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार
भारतीय सेनाध्यक्ष १९ गते नेपाल आउने
चौरसियाको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा पार्टी धर्नामा
बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षकको जिम्मा बालगोपाललाई
चन्द्रमाको सतहमा पानी भेटियो, मानव जीवनको सम्भावना तर्फ नयाँ खुट्किलो : नासा
बझाङबाट भेडा च्याङ्ग्रा चराउन चीनसम्म पुग्छन् गाेठाला
कोभिड–१९ नियन्त्रण नियम उल्लङ्घन गरेको गरेपछि लण्डनमा नयाँ बेहुलीलाई १३ हजार डलर जरिवाना
एउटै भालेको तौल १४ किलो
हरेकपल सम्वाददाता १० माघ २०७६, शुक्रबार १८:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १० माघ । उमेर चार महिना । भारी जिउ । हाँसको झैँ चाल । भुइँमा थचक्क बसेपछि झट्टै उठ्दैन । सुस्तरी खोर चाहार्छ, चारो टिप्छ । यसरी नै एउटा ‘ब्रोइलर’ कुखुराको भालेले आफ्ना आखिरी दिन काटिरहेको छ ।
गत असोज ११ गते ‘अर्पणा पोल्ट्री फार्म’मा आएदेखि यसको आयु र तौलको गन्ती शुरु भयो । डेढ महिनाअघि १२ किलो २०० ग्राम रहेको भाले अहिले बढेर १४ किलो पुगेको छ । दैनिक ५० ग्रामका दरले बढिरहेको भालेको तौल १६ किलोसम्म पुग्ने आकलन कुखुरापालकको छ ।
‘यो भाले परीक्षणका लागि लामो समय पालिएको हो,’ फार्मका सञ्चालक विजय शर्माले भन्नुभयो, ‘अब यो धेरै समय यहाँ रहँदैन होला ।’ ‘ब्रोइलर’ कुखुराको आयु र तौलबारे अनुभव लिन नबेची राखिएको उहाँको भनाइ छ । उक्त भालेले अहिलेसम्म ६ किलोभन्दा बढी दाना खाइसकेको छ । उचित हेरचाहले भाले निरोग छ ।
‘भाले किन्नका लागि धेरैले सोधिरहनुभएको छ, वनभोज जाने या त्यस्तै समूह आए बेच्ने तयारीमा छु,’ शर्माले भन्नुभयो । उक्त भालेलाई अहिले बेच्दा बजार मूल्य रु तीन हजार २०० पर्छ । बागलुङ नगरपालिका–३ रातामाटास्थित ‘फार्म’मा पुग्ने जो कोही दङ्ग मानेर भाले हेर्छन् । कतिले उचाल्छन् पनि । भालेसँगै हुर्किएका दुई पोथी पनि छन्, जसको तौल आठ किलो पुगेको छ ।
नाफा–घाटा हेर्दा बुढो हुञ्जेल कुखुरा पाल्नु व्यावसायिक हितमा नभए पनि परीक्षणले नयाँ सिकाइ भएको कुखुरापालक शर्माको भनाइ छ । पैँतालीस दिन काटेपछि ‘ब्रोइलर’ कुखुराको तौल दैनिक ५० ग्रामका दरले बढ्ने गर्छ । पैँतालीसदेखि ६० दिनभित्र कुखुरा बेच्नयोग्य हुन्छ । ‘ब्रोइलर’ कुखुराको आयु ६ देखि आठ महिनासम्म हुने बताइन्छ ।
शर्मा विसं २०६१ देखि कुखुरापालन व्यवसायमा हुनुहुन्छ । घर व्यवहारदेखि, बालबच्चाको पढाइसम्म सोही व्यवसायबाट धानिएको छ । ‘फार्म’मा अहिले एक हजार कुखुरा छन् । उहाँलाई व्यवसायमा श्रीमती गीताको दरिलो साथ छ ।
‘१६ वर्ष भयो कुखुरापालनमा लागेको, रु ४५ हजारबाट शुरु गरेको लगानी अहिले रु १२ लाख बढी पुगेको छ,’ गीताले भन्नुभयो । शुरुमा घरकै सानो कोठाबाट शर्मा दम्पतीले कुखुरापालन व्यवसाय शुरु गरेको थियो । उहाँहरुले अहिले आधुनिक खोर बनाएर कुखुरापालन गरिरहनुभएको छ । वर्षमा छ ‘लट’ कुखुरा तयार हुन्छन् ।
एकपटकमा झण्डै रु ६० देखि ७० हजारसम्म मुनाफा निस्कन्छ । बजार मूल्यमा आउने उतारचढावले कहिलेकाहीँ आम्दानी घटबढ हुन्छ । अहिले जिउँदो ‘ब्रोइलर’ कुखुरा प्रतिकिलो रु २ सय ३० मा बिक्री भइरहेको छ । कुखुरापालनसँगै शर्मा दम्पतीको मासु, किराना र खाजा पसल पनि छ ।
‘फ्रेस हाउस’का लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङबाट गत आवमा रु एक लाख ९४ हजार अनुदान आएको थियो । त्यसमा रु तीन लाख थपेर मापदण्डअनुसारको व्यवस्थित ‘फ्रेस हाउस’ सञ्चालन गरिएको शर्माले बताउनुभयो । व्यवसायमा शर्मा दम्पतीको लगाव र मेहनत देखेर गाउँले पनि छक्क पर्छन् ।
कुखुरापालकका लागि अनुदानभन्दा अनुभव आदानप्रदान र तालीम बढी महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १४:३६
ओझेलमा अनौठो गुफा
२० माघ २०७६, सोमबार १४:३३
१ महिनामै २ पटक सुत्केरी, युवतीले जन्माइन् ३ बच्चा !
२६ कार्तिक २०७६, मंगलवार १३:०५
एउटै बोकाको मूल्य रु तीन लाख !
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार ०८:४७
विश्व नै शाकाहारी भए के हुन्छ ? यस्ता छन् ८ तथ्य
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार ०८:४०
२ भाद्र २०७६, सोमबार १२:०२
सर्पलाई सन्तानसरह माया !
फिल्म भाँडाकुटी घोषणा, मुकुन र बेनिशा मूख्य भुमिकामा